ဒီအကြောင်းရင်း (၁၂)ခု ရှိနေရင် သွေး မလှူပါနဲ့။ -
Posted on April 12, 2019 April 12, 2019 Author For Her Myanmar	Comment(0)
သွေးလှူတာဟာ မွန်မြတ်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီအလုပ်မှာလည်း သွေးလှူတဲ့ သူနဲ့ သွေးအလှူခံမယ့်သူတွေအတွက် သတိထားရမယ့် အချက်တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ သြော်.. ရောဂါမရှိရင် ပြီးရောပေါ့… လှူလို့ရတယ် မဟုတ်ဘူးလားလို့ ပြောတော့မယ်မလား.. သိနေတယ်.. ကိုယ်ကသာ ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ပေမဲ့ တကယ့်တကယ်ကျ ရှော့ခ်အကြီးကြီး တက်သွားနိုင်တာမို့ ဒီအချက်တွေကိုတော့ သတိထားသင့်ပါတယ်နော်…
၁။ ဆေးဝါးတစ်ခုခု မှီဝဲနေရတယ်ဆိုရင်
အများအားဖြင့်တော့ ဆေးဝါးတွေက သွေးလှူတာကို အနှောင့်အယှက် မဖြစ်စေတတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တချို့ဆေးဝါးတွေကျတော့ သွေးမလှူခင်မှာ ကြိုရပ်ထားဖို့ လိုပါတယ်နော်။ တကယ်လို့များ နေမကောင်းလို့ ပဋိဇီဝဆေး သောက်နေရတယ်ဆိုရင် သေသေချာချာ ပြန်ကျန်းမာတဲ့အထိ စောင့်သင့်ပါတယ်။ အက်စပရင်လို သွေးကျဲဆေးမျိုး သောက်နေရတယ်ဆိုရင်တော့ သွေးမလှူခင် အနည်းဆုံး နှစ်ရက်လောက် ရပ်ထားသင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သွေးလှူတော့မယ်ဆိုရင် လက်ရှိသောက်နေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအကြောင်း ဆရာဝန်ကို ကြိုတင်ပြောပြထားသင့်ပါတယ်နော်…
၂။ မကြာခင်ကမှ ကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုး ထိုးထားတယ်ဆိုရင်
တုပ်ကွေး ကာကွယ်ဆေးတွေ သားအိမ်ခေါင်းကာကွယ်ဆေးတွေကို ပြောချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ တချို့ ကာကွယ်ဆေးတွေက ရောဂါပိုးတွေကို အစွမ်းမဲ့အောင် လုပ်ပြီး ထွင်ထားတာပါ။ ဥပမာပြောရရင် ဝက်သက်တို့ ရေကျောက်တို့ပေါ့။ ဒါကြောင့် ဒီလိုမျိုး ပိုးကနေတစ်ဆင့် ကာကွယ်ဆေး ထိုးထားတယ်ဆိုရင် အနည်းဆုံး လေးပတ်ကြာမှ သွေးလှူသင့်ပါတယ်နော်.. သွေးမလှူခင် ထိုးထားတဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေနဲ့ ဘယ်လောက်ကြာမှ သွေးပြန်လှူသင့်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေကို ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ လိုပါတယ် ယောင်းတို့ရေ..
၃။ စိတ်မချရတဲ့ ဆိုင်က တက်တူးထိုးထားမိတယ်ဆိုရင်
ဘာဆိုင်လို့လဲ.. တက်တူးဆိုင်တွေက တက်တူးဆေးတွေကို ပြန်သုံးတာမျိုး မလုပ်ပါဘူး၊ အပ်တွေကိုတောင် တစ်ခါသုံးတွေ သုံးတာ၊ ပိုးပြန်သတ်တာပဲလို့ ပြန်ပြောတော့မယ် မလား… ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီဘက်ခေတ်မှာတော့ တက်တူးကနေလည်း ရောဂါကူးတတ်တယ်ဆိုတဲ့ ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတက တော်တော်များများမှာ ရှိနေတဲ့အတွက် ဘက်စုံ၊ထောင့်စုံကနေ စဉ်းစားပြီး စိတ်ချရတဲ့ အရာတွေကိုပဲ သုံးကြတာများပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရာနှုန်းပြည့် မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့ သတိချပ်ရပါမယ် ယောင်းတို့ရေ… တကယ်လို့များ ဒီလို အပ်တွေကို ပိုးပြန်မသတ်၊ တစ်ခါသုံးပြီးသားဆေးတွေကို ပြန်သုံးတတ်တဲ့ ဆိုင်တွေမှာ ကိုယ်က မသိလိုက်ဘဲ တက်တူးထိုးထားမိတယ်ဆိုရင် အနည်းဆုံး နှစ် နှစ် စောင့်ပြီး သွေးကတစ်ဆင့် ကူးစက်နိုင်တဲ့ ရောဂါပိုးတွေ ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးပြီးမှ လှူသင့်ပါတယ်။
၄။ အသည်းရောင်အသားဝါပိုး ဒါမှမဟုတ် HIV ပိုး ရှိနေတယ်ဆိုရင်
ဒါတော့ တော်တော်များများ သိပြီးသားပါ။ ဒီရောဂါပိုးတွေက သွေးကနေတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်တာကြောင့် ဒီလို ပိုးတွေရှိနေရင် သွေးမလှူဖို့ သတိပြုသင့်ပါတယ်။ အသည်းရောင်အသားဝါပိုး ဆိုရင် အသည်းကင်ဆာဖြစ်စေတတ်တာကြောင့် ဒီရောဂါပိုးတွေ လုံးဝကူးစက်စေလို့ မဖြစ်ဘူးနော်…
သွေးမလှူခင်မှာ ခရီးသွားထားခြင်း ရှိ၊ မရှိ ဆိုတာကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ဥပမာ ငှက်ဖျားပေါတဲ့ ဒေသကို ခရီးသွားထားတယ်ဆိုရင် သွေးမလှူခင် ဒါကို ပြောထားသင့်ပါတယ်။ လူတွေသိကြတာက ငှက်ဖျားက ခြင်ကိုက်ရာတာ ကူးတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ငှက်ဖျားပိုး သွေးထဲမှာ ရှိနေတဲ့အချိန် သွေးလှူမိရင်လည်း တခြားသူကို ကူးသွားတတ်တာမို့ ဒါကိုလည်း မပေါ့ဆမိဖို့ လိုပါတယ်နော်..
၆။ ရှိသင့်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် မပြည့်ဘူးဆိုရင်
ဒါတော့ စေတနာ အမှားနဲ့ လုပ်မိတတ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ်အလေးချိန်က ပေါင် ၁၁၀ အောက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် သွေးလှူဖို့ အဆင်မပြေပါဘူး။ ကိုယ်အလေးချိန် မပြည့်တဲ့သူတွေက သွေးထုထည်လည်း နည်းတာကြောင့် တကယ်တမ်း သွေးလှူဖို့ သွေးထုတ်လိုက်တဲ့အခါ ခံနိုင်ရည်မရှိပါဘူး။ သွေးလှူရှင်တွေအတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းတွေထဲမှာ အနည်းဆုံး ပေါင်၁၁၀ (ပေါင် ၁၀၀ အထက်) ရှိမှ သွေးလှူသင့်တယ်လို့ ဆိုထားပေမဲ့ ကိုယ်က သွေးလှူချင်တဲ့ စေတနာဇောများနေတဲ့အခါ ငါ့မှာ ခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ခေါင်းမာပြီး လှူတာမျိုးက ဖြစ်တတ်တယ်လေ။ ဒီအခါမျိုးမှာ တကယ်တမ်း ထိခိုက်ရတာက ကိုယ်ပဲ မဟုတ်လား…
၇။ လတ်တလော နေမကောင်းဖြစ်ထားတယ်ဆိုရင်
သွေးလှူခါနီးကျမှ အအေးမိတာ၊ လည်ချောင်းနာတာ၊ ခေါင်းကိုက်တာ စတာတွေ ခံစားနေရတယ်ဆိုရင် သွေးလှူဖို့ကို ရက်ရွေ့သင့်ပါတယ်။ အနည်းဆုံး နေကောင်းတာ နှစ်ရက်လောက်ကြာမှ သွေးပြန်လှူသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ကျန်းမာနေမှ သွေးလှူတာမျိုးကို လုပ်သင့်ပါတယ်။
Related Article >>> ယောင်းမသိသေးတဲ့ ယောင်းရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်း
၈။ သံဓာတ် များလွန်း၊ နည်းလွန်းတာ
အမျိုးသမီးတွေမှာ 12.5g/dL အမျိုးသားတွေမှာ 13g/dL အောက် သွေးအားနည်းနေမယ်ဆိုရင် သွေးမလှူသင့်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ပုံမှန်သွေးလှူဒါန်းလေ့ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို သံဓာတ်အားဆေး သောက်ခိုင်းတာ သံဓာတ်ပါတဲ့ အစားအစာတွေ စားဖို့ အကြံပေးတာပါ။ ဒီလိုပါပဲ… သံဓာတ်သိပ်များနေတဲ့သူတွေကလည်း သွေးမလှူသင့်ပါဘူးနော်.. သံဓာတ်များလွန်းတာက နှလုံးရောဂါ၊ လေဖြတ်ခြင်း၊ ကင်ဆာနဲ့ အခြားရောဂါတွေကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် သွေးအား 18g/dL နဲ့ အထက် ရှိနေပြီဆိုရင် သွေးမလှူခင် ဆရာဝန်နဲ့ အရင် စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်နော်…
၉။ ကင်ဆာရောဂါ ရှိနေခဲ့ရင်
သွေးကနေတစ်ဆင့် ကင်ဆာရောဂါကူးတယ်ဆိုတာ မရှိသလောက် ရှားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကင်ဆာဝေဒနာရှင် တစ်ယောက် သွေးလှူမယ်ဆိုရင်တော့ သတိထားစရာတွေက အများကြီးပါပဲ … ပြောမယ်ဆိုရင် ကင်ဆာရောဂါကို ကုသနေဆဲသူတွေက သွေးလုံးဝ မလှူသင့်တဲ့ သူတွေထဲ ပါပါတယ်နော်.. အထူးသဖြင့် သွေးကင်ဆာလို ရောဂါမျိုး ရှိနေတဲ့သူတွေဆိုရင်ပေါ့..
ကိုယ်ဝန်မရှိခင်ကထက်စာရင် သွေးထုထည်များလာတာ မှန်ပေမဲ့ ကလေးမွေးပြီး အနည်းဆုံး ၆ ပတ်လောက် စောင့်ပြီးမှ သွေးလှူသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှိစဉ်မှာတော့ ကလေးနဲ့ ကိုယ့်ကျန်းမာရေးကိုသာ ဂရုစိုက်ပါ ယောင်းတို့ရေ… သွေးမလှူခင်မှာလည်း ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး သံဓာတ်အားဖြည့်ဆေးတွေ သောက်ထားသင့်ပါတယ်နော်…
Related Article >>> သွေးတိုးနဲ့ဆီးချိုရောဂါ ယှဉ်တွဲခံစားနေရသူများအတွက် ကျန်းမာအောင်နေထိုင်နည်း
၁၁။ မကြာသေးခင်ကမှ နားဖောက်ထားတယ်ဆိုရင်
မကြာသေးခင်ကမှ နားဖောက်ထားတယ်ဆိုရင် အနည်းဆုံး တစ်နှစ်လောက်စောင့်၊ ဆေးစစ်ပြီး သွေးကတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေ မရှိဘူးဆိုမှ သွေးလှူသင့်ပါတယ်။ တက်တူးထိုးသလိုပါပဲ တစ်ခါသုံးအပ်တွေ မသုံးဘူးဆိုရင် ရောဂါကူးစက်နိုင်ခြေ များပါတယ်။
၁၂။ သိပ်မကြာခင်က ဆစ်ဖလစ်ရောဂါ ဖြစ်ထားတယ်ဆိုရင်
ဒါဆိုရင်လည်း အနည်းဆုံး တစ်နှစ်လောက်နေမှ သွေးလှူလို့ ရမှာပါ။ ဆစ်ဖလစ်ရောဂါပိုးက ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တစ်ခါ ကုသမှုခံယူပြီး အမြစ်မပြတ်တဲ့အခါ ထပ်ခါထပ်ခါ ကုသမှုခံယူရတာမျိုးတွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင် ဘယ်အချိန်မှာ သွေးလှူသင့်လဲ ဘယ်အချိန်မှာ သွေးမလှူသင့်ဘူးလဲ၊ သွေးမလှူခင်မှာ ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားရမလဲဆိုတာ အကြမ်းဖျဉ်းအားဖြင့်တော့ သိသွားလောက်ပါပြီနော်.. သွေးလှူခြင်းက မွန်မြတ်တယ်ဆိုပေမဲ့ သွေးလှူတဲ့အခါ ကိုယ်ရော၊ သွေးအလှူခံမယ့်သူပါ မထိခိုက်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပဲ မဟုတ်လား..
ဘာသာပြန်ရေးသားသူ- ဒေါက်တာ ထက်ထက်ဇော်ဝင်း (ကျန်းကျန်းမာမာ by Alinker)
စတေနာဇောနဲ့ မမှားကွစဖေို့ ဒါလေးကိုတော့ ဖတျထားဖို့ လိုမယျ ယောငျးတို့ရေ…
သှေးလှူတာဟာ မှနျမွတျတဲ့ အလုပျတဈခုပါ။ ဒါပမေဲ့ ဒီအလုပျမှာလညျး သှေးလှူတဲ့ သူနဲ့ သှေးအလှူခံမယျ့သူတှအေတှကျ သတိထားရမယျ့ အခကျြတှေ အမြားကွီး ရှိပါတယျ။ သွျော.. ရောဂါမရှိရငျ ပွီးရောပေါ့… လှူလို့ရတယျ မဟုတျဘူးလားလို့ ပွောတော့မယျမလား.. သိနတေယျ.. ကိုယျကသာ ဘာမှမဟုတျဘူးလို့ ထငျပမေဲ့ တကယျ့တကယျကြ ရှော့ချအကွီးကွီး တကျသှားနိုငျတာမို့ ဒီအခကျြတှကေိုတော့ သတိထားသငျ့ပါတယျနျော…
၁။ ဆေးဝါးတဈခုခု မှီဝဲနရေတယျဆိုရငျ
အမြားအားဖွငျ့တော့ ဆေးဝါးတှကေ သှေးလှူတာကို အနှောငျ့အယှကျ မဖွဈစတေတျပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ တခြို့ဆေးဝါးတှကေတြော့ သှေးမလှူခငျမှာ ကွိုရပျထားဖို့ လိုပါတယျနျော။ တကယျလို့မြား နမေကောငျးလို့ ပဋိဇီဝဆေး သောကျနရေတယျဆိုရငျ သသေခြောခြာ ပွနျကနျြးမာတဲ့အထိ စောငျ့သငျ့ပါတယျ။ အကျစပရငျလို သှေးကြဲဆေးမြိုး သောကျနရေတယျဆိုရငျတော့ သှေးမလှူခငျ အနညျးဆုံး နှဈရကျလောကျ ရပျထားသငျ့ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သှေးလှူတော့မယျဆိုရငျ လကျရှိသောကျနတေဲ့ ဆေးဝါးတှအေကွောငျး ဆရာဝနျကို ကွိုတငျပွောပွထားသငျ့ပါတယျနျော…
၂။ မကွာခငျကမှ ကာကှယျဆေးတဈမြိုးမြိုး ထိုးထားတယျဆိုရငျ
တုပျကှေး ကာကှယျဆေးတှေ သားအိမျခေါငျးကာကှယျဆေးတှကေို ပွောခငျြတာ မဟုတျပါဘူး။ တခြို့ ကာကှယျဆေးတှကေ ရောဂါပိုးတှကေို အစှမျးမဲ့အောငျ လုပျပွီး ထှငျထားတာပါ။ ဥပမာပွောရရငျ ဝကျသကျတို့ ရကြေောကျတို့ပေါ့။ ဒါကွောငျ့ ဒီလိုမြိုး ပိုးကနတေဈဆငျ့ ကာကှယျဆေး ထိုးထားတယျဆိုရငျ အနညျးဆုံး လေးပတျကွာမှ သှေးလှူသငျ့ပါတယျနျော.. သှေးမလှူခငျ ထိုးထားတဲ့ ကာကှယျဆေးတှနေဲ့ ဘယျလောကျကွာမှ သှေးပွနျလှူသငျ့တယျဆိုတဲ့ အကွောငျးတှကေို ဆရာဝနျနဲ့ ဆှေးနှေးဖို့ လိုပါတယျ ယောငျးတို့ရေ..
Related Article >>> သငျ့သှေးဖွငျ့ အသကျကယျပါ။
၃။ စိတျမခရြတဲ့ ဆိုငျက တကျတူးထိုးထားမိတယျဆိုရငျ
ဘာဆိုငျလို့လဲ.. တကျတူးဆိုငျတှကေ တကျတူးဆေးတှကေို ပွနျသုံးတာမြိုး မလုပျပါဘူး၊ အပျတှကေိုတောငျ တဈခါသုံးတှေ သုံးတာ၊ ပိုးပွနျသတျတာပဲလို့ ပွနျပွောတော့မယျ မလား… ဟုတျပါတယျ။ ဒီဘကျခတျေမှာတော့ တကျတူးကနလေညျး ရောဂါကူးတတျတယျဆိုတဲ့ ကနျြးမာရေး ဗဟုသုတက တျောတျောမြားမြားမှာ ရှိနတေဲ့အတှကျ ဘကျစုံ၊ထောငျ့စုံကနေ စဉျးစားပွီး စိတျခရြတဲ့ အရာတှကေိုပဲ သုံးကွတာမြားပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ရာနှုနျးပွညျ့ မဟုတျဘူးဆိုတာကိုတော့ သတိခပျြရပါမယျ ယောငျးတို့ရေ… တကယျလို့မြား ဒီလို အပျတှကေို ပိုးပွနျမသတျ၊ တဈခါသုံးပွီးသားဆေးတှကေို ပွနျသုံးတတျတဲ့ ဆိုငျတှမှော ကိုယျက မသိလိုကျဘဲ တကျတူးထိုးထားမိတယျဆိုရငျ အနညျးဆုံး နှဈ နှဈ စောငျ့ပွီး သှေးကတဈဆငျ့ ကူးစကျနိုငျတဲ့ ရောဂါပိုးတှေ ရှိ၊ မရှိ စဈဆေးပွီးမှ လှူသငျ့ပါတယျ။
၄။ အသညျးရောငျအသားဝါပိုး ဒါမှမဟုတျ HIV ပိုး ရှိနတေယျဆိုရငျ
ဒါတော့ တျောတျောမြားမြား သိပွီးသားပါ။ ဒီရောဂါပိုးတှကေ သှေးကနတေဈဆငျ့ ကူးစကျတတျတာကွောငျ့ ဒီလို ပိုးတှရှေိနရေငျ သှေးမလှူဖို့ သတိပွုသငျ့ပါတယျ။ အသညျးရောငျအသားဝါပိုး ဆိုရငျ အသညျးကငျဆာဖွဈစတေတျတာကွောငျ့ ဒီရောဂါပိုးတှေ လုံးဝကူးစကျစလေို့ မဖွဈဘူးနျော…
သှေးမလှူခငျမှာ ခရီးသှားထားခွငျး ရှိ၊ မရှိ ဆိုတာကလညျး အရေးကွီးပါတယျ။ ဥပမာ ငှကျဖြားပေါတဲ့ ဒသေကို ခရီးသှားထားတယျဆိုရငျ သှေးမလှူခငျ ဒါကို ပွောထားသငျ့ပါတယျ။ လူတှသေိကွတာက ငှကျဖြားက ခွငျကိုကျရာတာ ကူးတာပါ။ ဒါပမေဲ့ ငှကျဖြားပိုး သှေးထဲမှာ ရှိနတေဲ့အခြိနျ သှေးလှူမိရငျလညျး တခွားသူကို ကူးသှားတတျတာမို့ ဒါကိုလညျး မပေါ့ဆမိဖို့ လိုပါတယျနျော..
၆။ ရှိသငျ့တဲ့ ကိုယျအလေးခြိနျ မပွညျ့ဘူးဆိုရငျ
ဒါတော့ စတေနာ အမှားနဲ့ လုပျမိတတျပါတယျ။ တကယျလို့ ကိုယျအလေးခြိနျက ပေါငျ ၁၁၀ အောကျဖွဈနမေယျဆိုရငျ သှေးလှူဖို့ အဆငျမပွပေါဘူး။ ကိုယျအလေးခြိနျ မပွညျ့တဲ့သူတှကေ သှေးထုထညျလညျး နညျးတာကွောငျ့ တကယျတမျး သှေးလှူဖို့ သှေးထုတျလိုကျတဲ့အခါ ခံနိုငျရညျမရှိပါဘူး။ သှေးလှူရှငျတှအေတှကျ သတျမှတျထားတဲ့ စညျးကမျးတှထေဲမှာ အနညျးဆုံး ပေါငျ၁၁၀ (ပေါငျ ၁၀၀ အထကျ) ရှိမှ သှေးလှူသငျ့တယျလို့ ဆိုထားပမေဲ့ ကိုယျက သှေးလှူခငျြတဲ့ စတေနာဇောမြားနတေဲ့အခါ ငါ့မှာ ခံနိုငျရညျရှိပါတယျဆိုတဲ့ အတှေးနဲ့ ခေါငျးမာပွီး လှူတာမြိုးက ဖွဈတတျတယျလေ။ ဒီအခါမြိုးမှာ တကယျတမျး ထိခိုကျရတာက ကိုယျပဲ မဟုတျလား…
၇။ လတျတလော နမေကောငျးဖွဈထားတယျဆိုရငျ
သှေးလှူခါနီးကမြှ အအေးမိတာ၊ လညျခြောငျးနာတာ၊ ခေါငျးကိုကျတာ စတာတှေ ခံစားနရေတယျဆိုရငျ သှေးလှူဖို့ကို ရကျရှသေ့ငျ့ပါတယျ။ အနညျးဆုံး နကေောငျးတာ နှဈရကျလောကျကွာမှ သှေးပွနျလှူသငျ့ပါတယျ။ ကိုယျတိုငျကနျြးမာနမှေ သှေးလှူတာမြိုးကို လုပျသငျ့ပါတယျ။
Related Article >>> ယောငျးမသိသေးတဲ့ ယောငျးရဲ့ ခန်ဓာကိုယျအကွောငျး
၈။ သံဓာတျ မြားလှနျး၊ နညျးလှနျးတာ
အမြိုးသမီးတှမှော 12.5g/dL အမြိုးသားတှမှော 13g/dL အောကျ သှေးအားနညျးနမေယျဆိုရငျ သှေးမလှူသငျ့ပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ ပုံမှနျသှေးလှူဒါနျးလရှေိ့တဲ့ အမြိုးသမီးတှကေို သံဓာတျအားဆေး သောကျခိုငျးတာ သံဓာတျပါတဲ့ အစားအစာတှေ စားဖို့ အကွံပေးတာပါ။ ဒီလိုပါပဲ… သံဓာတျသိပျမြားနတေဲ့သူတှကေလညျး သှေးမလှူသငျ့ပါဘူးနျော.. သံဓာတျမြားလှနျးတာက နှလုံးရောဂါ၊ လဖွေတျခွငျး၊ ကငျဆာနဲ့ အခွားရောဂါတှကေို ဖွဈစပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သှေးအား 18g/dL နဲ့ အထကျ ရှိနပွေီဆိုရငျ သှေးမလှူခငျ ဆရာဝနျနဲ့ အရငျ စဈဆေးသငျ့ပါတယျနျော…
၉။ ကငျဆာရောဂါ ရှိနခေဲ့ရငျ
သှေးကနတေဈဆငျ့ ကငျဆာရောဂါကူးတယျဆိုတာ မရှိသလောကျ ရှားပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကငျဆာဝဒေနာရှငျ တဈယောကျ သှေးလှူမယျဆိုရငျတော့ သတိထားစရာတှကေ အမြားကွီးပါပဲ … ပွောမယျဆိုရငျ ကငျဆာရောဂါကို ကုသနဆေဲသူတှကေ သှေးလုံးဝ မလှူသငျ့တဲ့ သူတှထေဲ ပါပါတယျနျော.. အထူးသဖွငျ့ သှေးကငျဆာလို ရောဂါမြိုး ရှိနတေဲ့သူတှဆေိုရငျပေါ့..
ကိုယျဝနျမရှိခငျကထကျစာရငျ သှေးထုထညျမြားလာတာ မှနျပမေဲ့ ကလေးမှေးပွီး အနညျးဆုံး ၆ ပတျလောကျ စောငျ့ပွီးမှ သှေးလှူသငျ့ပါတယျ။ ကိုယျဝနျရှိစဉျမှာတော့ ကလေးနဲ့ ကိုယျ့ကနျြးမာရေးကိုသာ ဂရုစိုကျပါ ယောငျးတို့ရေ… သှေးမလှူခငျမှာလညျး ဆရာဝနျနဲ့ တိုငျပငျပွီး သံဓာတျအားဖွညျ့ဆေးတှေ သောကျထားသငျ့ပါတယျနျော…
Related Article >>> သှေးတိုးနဲ့ဆီးခြိုရောဂါ ယှဉျတှဲခံစားနရေသူမြားအတှကျ ကနျြးမာအောငျနထေိုငျနညျး
၁၁။ မကွာသေးခငျကမှ နားဖောကျထားတယျဆိုရငျ
မကွာသေးခငျကမှ နားဖောကျထားတယျဆိုရငျ အနညျးဆုံး တဈနှဈလောကျစောငျ့၊ ဆေးစဈပွီး သှေးကတဈဆငျ့ ကူးစကျတတျတဲ့ ရောဂါတှေ မရှိဘူးဆိုမှ သှေးလှူသငျ့ပါတယျ။ တကျတူးထိုးသလိုပါပဲ တဈခါသုံးအပျတှေ မသုံးဘူးဆိုရငျ ရောဂါကူးစကျနိုငျခွေ မြားပါတယျ။
၁၂။ သိပျမကွာခငျက ဆဈဖလဈရောဂါ ဖွဈထားတယျဆိုရငျ
ဒါဆိုရငျလညျး အနညျးဆုံး တဈနှဈလောကျနမှေ သှေးလှူလို့ ရမှာပါ။ ဆဈဖလဈရောဂါပိုးက ခန်ဓာကိုယျတဈခုလုံးမှာ ဖွဈတတျပါတယျ။ တဈခါ ကုသမှုခံယူပွီး အမွဈမပွတျတဲ့အခါ ထပျခါထပျခါ ကုသမှုခံယူရတာမြိုးတှလေညျး ရှိတတျပါတယျ။
ဒီလောကျဆိုရငျ ဘယျအခြိနျမှာ သှေးလှူသငျ့လဲ ဘယျအခြိနျမှာ သှေးမလှူသငျ့ဘူးလဲ၊ သှေးမလှူခငျမှာ ဘာတှေ ပွငျဆငျထားရမလဲဆိုတာ အကွမျးဖဉျြးအားဖွငျ့တော့ သိသှားလောကျပါပွီနျော.. သှေးလှူခွငျးက မှနျမွတျတယျဆိုပမေဲ့ သှေးလှူတဲ့အခါ ကိုယျရော၊ သှေးအလှူခံမယျ့သူပါ မထိခိုကျရငျတော့ အကောငျးဆုံးပဲ မဟုတျလား..
ဘာသာပွနျရေးသားသူ- ဒေါကျတာ ထကျထကျဇျောဝငျး (ကနျြးကနျြးမာမာ by Alinker)
Tagged blood, don't, Donation, facts, Health, KKMM, problems
ကလေးများတွင် ဖြစ်တတ်သော ရှားပါးရောဂါ Albinismအကြောင်း တစ်စေ့တစောင်း
Posted on May 30, 2018 July 25, 2018 Author Aye Mon Kyaw
တကယ်ပဲ မြန်မာကမွေးတဲ့ အင်္ဂလိပ်ကလေးလား? လူဝင်စားလား? ရောဂါလား?
Posted on February 1, 2019 Author For Her Myanmar
လွဲမှားနေတဲ့ အရပ်ပြောဆေးပညာအယူအဆနဲ့ တကယ့်အချက်အလက်မှန်များ
လွဲတော့လွဲနေတယ်။ ဖတ်ပြီးရင်တော့ သတိပြုဆင်ခြင်နိုင်တာပေါ့။